VaTsigiri veMDC-T Vokuvadzana kuBulawayo
Kubvumbi 22, 2011
Muguta reBulawayo manga muine chitsvuku neChishanu zvichitevera kutemana, kuchekana nekurwisana kukuru kwaitika pakati penhengo dzeMDC inotungamirwa naVaMorgan Tsvangirai.
Vatsigiri vebato iri vanonzi vaita mhirizhonga inotyisa zvapa kuti mapurisa asunge vanhu vanodarika makumi maviri uye vamwe gumi vanonzi vakuwara zvakaipisisa.
Vatsigiri veMDC vanonzi vange vachitemana nematombo uye kuchekana nemapanga izvo zvazopa kuti mapurisa anodzivirira mhirizhonga kana kuti "anti riot police" agume apindira.
Zvinonzi pane kunetsana kunotyisa pakati pevari kutsvaga rutsigiro rwekutungamira bato mudunhu reBulawayo pakati pegurukota rezvemakmbani ehurumende, VaGorden Moyo, nasachigaro veBulawayo pari zvino, VaMartson Hlalo.
Vane ruzivo nezviri kuitika vanoti hondo huru iripozve pakati pemutevedzeri wemutungamiri we MDC, Muzvare Thokozane Khupe, nemutevedzeri wemutauriri webato, Muzvare Thabitha Khumalo, avo vari kudawo kukwikwidza chigaro chemutevedzeri wemutungamiri webato iri.
Zvinonzi kurwira chinzvimbo kwevaviri ava ndiko kuri kupa kuti vatsigiri vaVaHlalo, avo vari kutsigira chikwata chiri kutungamirwa naMuzvare Khumalo, varwisane nevatsigiri vaVaMoyo, avo vari kudivi rechikwata chaMuzvare Khupe.
Sarudzo dzehutungamiri hweBulawayo dzakasiirwa panzira mushure mekunge paita kurwisana kukuru. Padzakaitwa kechipiri, hadzina zvakare kupera mushure mekunge mhirizhonga yatanga zvakare.
Kunetsana kuri kuitika mubato iri kuri kuburitsawo pachena kuti MDC-T haina masimba ekugadzirisa zviri kunetsa mubato rayo.
Vanhu vakawanda muBulawayo vari kuti sarudzo yekongiresi yepurovhinzi iyi inofanirwa kudzokororwa yese, sezvo vamwe vanhu vakatadziswa kuvhota nevavanoti vari kuda kupinda pazvigaro vachiita zvechitsotsi.
Zvinonzi VaTsvangirai mbune vakaudza hutungamiri hwebato ravo, kana kuti standing committee kuti zviri kunetsa muBulawayo zvichagadziriswa kana kongiresi huru yapera kuitwa kupera kwemwedzi uno.
Izvi zvinonzi hazvina kutambirwa nevatsigiri vakawanda vebato iri muBulawayo.
Vange vachikokera sarudzo idzi, VaFidelis Mhashu, vanoti pane zvikwata zviri kurwisana mubato ravo izvo zvava kudzosera shure zvinhu zvakawanda mubato.
Nyanzvi mune zvematongero enyika, uye vachishanda saPrograms Manager weCrisis in Zimbabwe Coalition, VaPedzisai Ruhanya, vanoti VaTsvangirai mbune vanofanirwa kuratidza hutungamiri hwavo vagadzirise makakatanwa ari muBulawayo aya.﻿
Hukuro naVaFidelis Mhashu
Hurukuro naVaPedzisayi Ruhanya